Fitaovam-pitiavana mitam-piadanana: mahavariana amin'ny bibilava toy ny biby fiompy any am-paradisa
Ny fiompiana bibilava dia midika fa mitondra andraikitra manokana
Matetika ny bibilava dia miteraka fanehoan-kevitra samihafa amin'ny olona: mahatsikaiky na mahavariana. Ireo olona izay mahavariana ny fahasoavan'ny bibilava iray dia mety tsy ho afa-po raha toa ka afaka mifindra toerana ireo biby tsy manan-tsaina, amin'ny alalan'ny fanelezana ny kirany.
Ny biby mandady am-pitiavana: be fanandramana amin'ny bibilava
Avy eo dia nanofahofa momba ny zavakanto sasany tamin'ny biby izy ireo.
Mamono amin'ny terrarium
Ny bibilava dia, mazava ho azy fa tsy ny biby fiompy tsotra. Matetika ny sakafo dia mampiseho fa ny bibilava dia tsy tokony hohajaina tanteraka toy ny hamsters, kisoa guinea ary ny bitro kely.
Ny fihokoana dia matetika mihinana biby velona irery ihany. Na dia tsy velona intsony aza ny sakafo, ohatra, ny fitantanana ny akorandriaka kely an-jazakely na tapa-jadona vitsivitsy dia ny fitsipika ho an'ny alika sasany. Zavatra tsy mitovy amin'ny mahazatra amin'ny karazam-borona mahazatra, izay azo ampiasaina amin'ny endriky ny vilany na plastika plastika.
Ny fihazonana bibilava dia matetika sarotra kokoa sy mora kokoa noho ny fihetsika kinekeny. Misy ihany koa ny fandaniana avo lenta, z. B. avy amin'ny vidin'ny herinaratra ho an'ny jiro fampiasana herinaratra (angamba koa fanatobiana fisakafoanana) sy ny fikarakarana lafo kokoa.
Bibilava maitso ao amin'ny terrarium
Ny mpitandrina bibilava tompon'andraikitra dia manolotra ny biby ny fari-piainana tsara indrindra ao amin'ny faritaniny.
Zava-dehibe ny mampifanaraka ny tara-masoandro amin'ny karazana bibilava, satria tsy ny bibilava rehetra no mahatsapa tsara ny manodidina azy. Ny bibilava misy lakolosy dia tokony hanana takaitra miaraka amin'ny dian-tongotra kokoa, raha toa kosa ny hazo bibilava dia mahatsapa ho tony ao amin'ny terrariums izay mihamitombo avo heny fa tsy amin'ny sakany.
Ho an'ny fandinihana ny bibilava iray alina, dia tsara ny manana jiro mamiratra mena na ao amin'ny terrarium, satria ny bibilava dia tsy mahatsikaritra hazavana ao anatin'io loko marevaka io ary avy eo tsy manelingelina ny olona.
Ho toy ny mpitandrina snake ho avy iray tsy maintsy miantoka koa fa ny dobo dia tsara ventilated. Azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny tady metaly lava na plastika vita amin'ny plastika ny fanafody ampy, ka ahafahana manamboatra ny lavaka fanasan-damba. Ny sehatra fanodinana fialan-tsasatra tsara dia manondro ny fametrahana fantsona fantsona roa. Amin'ny lafiny iray amin'ny faritra ambany, eo amin'ny ilany mifanohitra amin'ny faritra ambony.
Ny ankamaroan'ny karazana bibilava dia mila toerana miafina mba hialana amin'ny fialan-tsasatra. Miankina amin'ny karazana bibilava, trano fanatobiana mety tsara, toerana misy lemaka manify ary ny lavaka fanondrahana, izay mety ampiasain'ny bibilava ho toy ny fandroana ihany koa, dia anisan'ny toerana mety ihany koa.
Izay maniry ny hitazona andalana izay miditra ao amin'ny sokajy "poizina" sy / na "mihoatra ny metatra 3" dia tsy maintsy ankatoavin'ny biraon'ny tomponandraikitra tompon'andraikitra. Rehefa mikarakara bibilava misy poizina, dia asaina ihany koa ny manana sera mpanohitra mahomby ao an-trano mba hahafahany miady amin'ny alikaola.
Ny mpisotro toaka ho toy ny aphrodisiac - erotika
Fitsangatsanganana Amerikana - Etazonia ho toy ny toerana fitsangatsanganana